Sawirro:- Kooxda Al-Shabaab Oo Heshiis la gashay Somalia – XOGMAAL.COM
Dad badan oo baraha bulshada uga hadlay magaca Ciyaaryahankan uu wato iyo kooxda Al Shabaab uu ku biiray oo Soomaaliya ka dagaalanta ayaa dhalisay hadal heyn iyo in aragtiyo kala duwan looga dhiibto baraha bulshada.
By Soomaaliya	 Last updated Aug 25, 2018
Laacibka u dhashay Brazil Wergiton do Rosario Calmon balse ku ciyaara magaca Somalia ayaa ku biiray kooxda Al Shabaab ee ka dhisan wadanka Sacuudiga ka dib heshiis laba sano ah oo ay kala saxiixdeen.
Magaca xidigan lagu naaneesaa ama loo yaqaan Somalia ee uu wato iyo kooxda uu ku biiray ee Al Shabaab ayaa hadal heynta uu dhaliyay aad looga dareemaya baraha bulshada ku xiriirto.
Kooxda reer France ee Toulouse ayaa xaqiijisay in xiddigeedii khadka dhexe ee reer Brazil Somalia uu ku biiray kooxda reer Sacuudi ee Al-Shabaab kadib markii ay burburiyeen heshiiskii halka sano ahaa oo kooxdaas ugu haray.
Falastiiniyiinta ku socda Gasa iyo xujayda oo loo furayo Xadka Rafax.